Ziziphi iindlela zokufumana i-backlink kwiwebhusayithi yam?
I-backlink isebenza njengebhokisi lokuphila ngokusetyenziselwa i-website kwaye idlala indima ephambili kwindawo yokukhangela injini yokukhangela injini.Yingakho i-SEO ogqityiweyo batyalole kwezinye iifom zokwakha izixhumanisi ukuba zilandela izikhokelo zeGoogle okanye cha. Izindlela zokusasaza izizukulwana zibandakanya izithuba zabavakalisi, ukwabelana ngoluntu, ukuthunyelwa kweblogi, iiprogram zokufikelela kunye neefowuni ezihlawulwe.
Ezi zixhobo zokwakha izixhumanisi zingafaka isandla kwiinzame ze-SEO okanye ziphangale. Uninzi lwabanikazi bewebhsayithi bathatha amagama athi "Igalelo le-SEO" njengoko i-web imithombo yazo iphucula ukuphucula. Nangona kunjalo, inyaniso edabukisayo ngukuthi nangona ukwakha iphrofayili yekhonkco ephakamileyo, akukho siqinisekiso sokuthi uza kufumana indawo ephezulu yokukhangela injini.
Kulo nqaku, uya kufumana izizathu zokuba kutheni izixhumanisi zangaphandle azikwazi ukuchaphazela ngqo isikhundla sakho sesikhundla kwiphepha lemiphumo yosesho.
Kutheni ukufumana i-backlink kwisayithi yakho akusoloko kuphumela?
Ukuba ufumana iziqhagamshelwano zangaphandle kwiziko lakho ngeendlela zobuqhetseba ze-spammy, akunakukwenza okulungileyo. I-backlink ephezulu ephantsi kweewebhusayithi ze-third party ayiyi kukunika inkqubela kwi-SERP. Akukuphela nje ukuba isayithi lakho libe libala kwiZiphumo eziphezulu kwiGoogle, kodwa kwakhona usengozini yokuyifumanisa.
Kwiintsuku zethu, ii-webmasters ziyazi ingozi ezivela kwi-backlinks spammy ezifana nezixhumanisi zangaphandle ezivela kwiifama zekhonkco, izimvo zeblogi ze-spammy, izithuba zentengiso kunye namanqaku athile. Nangona kunjalo, abanye abanikazi bewebhsayithi, ingakumbi abo abatsha kule ndawo, banokuwela kwiindlela ezilula zokufumana i-juice yekhonkco eninzi kwimithombo yabo yewebhu ngexesha elifutshane. Ndiyincoma ngokukhawuleza ukuphepha naluphi na ubuchule bokuqhagamshelana nobuqhetseba njengokuba i-Google iyakwazi ukuqonda ngokukhawuleza kwaye ikwazi ukubona ngokukhawuleza bonke abaphulaphuli-mthetho kwaye ibenze. Awunakukwazi ukuba iGoogle iya kutolika njani le okanye i-backlink. Ngamanye amaxesha i-bots yokukhangela ibhala nje idibanisa kwiiwebhsayithi ze-spammy kwaye ungabaleli i-traffic kubo.
Ukuze ufumane umphumo obonakalayo kwikhankaso yokwakha ikhonkco, kufuneka uqiniseke ukuba ukwakha izixhumanisi ezivela kumasayithi asemthethweni, afanelekileyo kwi-niche yakho yemakethe, ethembekileyo, ngokuchaneka kakuhle kunye nokuxhaswa ngabanye igunya, izitifiketi ezithembekileyo nezihloniphekileyo.
Enye inkolelo evamile kulo mkhakha kukuba ukufumana i-backlink ukusuka kwenye ye-TOP imithombo ye-intanethi ye-intanethi njenge-Entrepreneur, i-Forbes okanye iNew York Times inokukhawuleza ifake iwebhusayithi kwi-SERP. Ayisoloko isebenza ngokufanayo kwinyani. Lekhonkco inokukunceda isayithi lakho ukuba liphakame phezulu kwaye ikulethe iitrafikhi ezininzi eziguqulwe okanye ezingenayo impembelelo kumatriki akho nonke.
Oko singenakukwazi ngokuqinisekileyo ukuba unxibelelwano luhle okanye lubi ekuboneni ukukhangela ngoba i-Google ingakwazi ukuyichaza ngoku kungabi yi-100% echaphazelekayo kodwa ithole ikhonkco njengoko ihlawulwe.
Iimeko ezifanayo ziyakwazi ukubonwa ngeembalo zeblogi. Kwezinye iimeko, ezi zixhumanisi zizisa ixabiso elininzi kwisayithi lakho, kodwa ngamanye amaxesha zibhalwa njengezobhengezo ze-spammy zoshishino lakho. Zonke izimvo zakho zeblogi zingavelisa iziphumo ezahlukeneyo kwisayithi lakho Source .